Taranka | January 2022
Affenpinscher - Maxaa Laga Filayaa Noocyadan Ey
Eeyaha oo aan u kala saari karno inay yihiin Affenpinschers maanta, waxay ka soo muuqdeen farshaxan Jarmal oo soo taxnaa qarnigii 16aad: iyagoo ku muujinaya inay yihiin jileec iyo wehel. Si kastaba ha noqotee, sida runta ah noocyo badan, ma jiraan diiwaanno qoran oo la isku halleyn karo oo ku saabsan nooca illaa dhammaadkii qarnigii 19aad. Waqtigaan, waxay umuuqataa inay jiraan laba cabir ... Sii akhri
Terire-ka Airedale - Maxaa Laga Filayaa Noocyadan Ey
Airedales waa heer sare sida eeyaha ugaarsiga, eeyaha, iyo xitaa eeyaha iyo adeegaha, laakiin iyagu waa, marka ugu horeysa, aamin iyo madadaalo saaxiibbada.
Akita waa eey aad u weyn oo ka soo jeeda Japan. Waxay yihiin muruqyo, waxay raadraac ku sameyn karaan taariikhdooda meel fog oo Jabbaan hore ah, iyo astaamo caafimaad iyo farxad.
Dib-u-eegista Taranka Afgaanistaan
Waa maxay Afgaanistaan? Afqaanistaanku waxay ka yimaadeen kooxda hound, ama haddii si sax ah loo sheego waxay ka soo jeedaan reerka aragga laga arko, oo dhammaantood aad u dheereeya, eeyaha u ekaada greyhound-ka u eg ee wax cunaya ayaa qayb ka ah. Eyga reer Afgaanistaan ​​wuxuu taagan yahay 26 illaa 28 inji dusheeda marka la engegayo, halka qaniinyadu dheerarkeedu yahay 24 illaa 26 inji. Ragga ayaa miisaamaya ... Sii akhriso
The Great Alaskan Husky: Maxaad u Baahan Tahay Inaad Ogaato
Alaskan Husky waa wax ka badan oo kaliya eey sled ka sareeya. Sidoo kale waa wehel ciyaar, debecsan qoys kasta. Akhri wax dheeraad ah si aad wax uga ogaato waxyaabaha ku saabsan isweydaarsiga!
Alaskan Klee Kai Dog Taranka - Xaqiiqada iyo Shakhsiyadda
Klee Kai waxaa laga soo saaray Siberian iyo Alaskan Huskies, oo ay weheliso caawimaadda Schipperke iyo American Eskimo si loo yareeyo bilaa cabsi. Sidan oo kale waxaad ka heli doontaa astaamo isku mid ah sida laga helo geedaha. Iyagu waa dad xiiseeyaan, jecel yihiin, aad u xoog badan cabirkooda, ugaarsato xeeladeysan iyo fanaaniinta baxsadka ah. Dilka ... Sii akhri
Tilmaamaha Buuxa ee Terrier-ka Godka Mareykanka
The American Pit Bull Terrier badanaa wuxuu helayaa kufsi xun, laakiin hagahayaga faahfaahsan waxaad dhawaan ogaan doontaa in tani ay tahay mid ka mid ah noocyada ugu caansan uguna jecel.
American Alsatian: Hagaha ugu dambeeya ee Eyga u eg Eyga
Alsatian-ka Mareykanku wuxuu umuuqan karaa yeey duurjoog ah laakiin iyagu waa kuwo aad u jilicsan oo saaxiibtinimo leh. Fiiri hageheena si aad waxbadan uga ogaato wehelkan weyn ee wehel.
Haddii aad raadineyso eey la wado oo daacad ah oo u eg yeey, mid ka mid ah noocyada ay tahay inaad tixgeliso waa Alaskan Malamutes. Raadi sababta adoo gujinaya halkan!
Bullypit: Miyuu Bulldog Pitbull Mareykanku isku daraa nooca eygaaga?
Ma waxaad raadineysaa eey waardiye caqli leh, maxaad u yeelan la’dahay labo? Bullyit waxay kaliya noqon kartaa bakhaarka aad raadineyso. Akhriso macluumaad dheeri ah oo ku saabsan Bullypit.
Baro Baasuukaha Mareykanka ee daran & xoog badan
Bandog American ah, oo sidoo kale loo yaqaan American Mastiff, waa mid ka mid ah sharadyadaada ugu fiican ee lagu cabsi gelinayo kuwa ku soo xadgudbaya. Ogow haddii aad hayso waxa ay ku qaadaneyso mulkiilaheeda!
Runta Ku Saabsan Xoogsheegtada Mareykanka
Diyaar u noqo inaad qalbigaaga ku guuleysato daacadnimada iyo jacaylka Bully American, iyadoo hageheena macluumaadka ku saabsan wax walba oo laga ogaanayo noocyadan.
Waxaa laga yaabaa inaad aragtay Goldie oo leh midabo kala duwan oo dahab ah, laakiin dhab ahaantii waxaa jira saddex nooc oo Goldens ah. Ku rux calanka Mareykanka Duuliyaha Dahabka ah ee Mareykanka.
Isbaanishka Biyaha ee Mareykanka - Maxaa Laga Filayaa Noocyadan Ey
Isbaanishka Biyaha ee Mareykanka (ama AWS, oo la soo gaabiyo) waa mid ka mid ah noocyo dhowr ah oo laga soo saaray Ameerika. Diiwaanno la isku halleyn karo oo ka mid ah AWS ayaa taariikhda dib ugu soo laabtay 1865. In kasta oo meesha eyga asalka ah ee asalka ah lagu muransan yahay, haddana waxaa si weyn loo rumeysan yahay inuu markii ugu horreysay ka soo muuqday dooxooyinka Wolf iyo Fox River ee Wisconsin, iyo ... Sii akhri
Aussiedoodles: La kulan Einstein ee adduunka eyga
Maxaad heli lahayd haddii aad isku dhex dartid laba eeyaha ugu caqliga badan, ee aadka loo jecel yahay ee dadka jecel? La kulan Aussiedoodle ama Aussie Poo. Halkan ka akhriso!
Ma ku firfircoon tahay Eyga Lo'da Australiya?
Eyga Ustaraaliya ee loo yaqaan 'Cattle Dog' waxaa loo yaqaanaa jaakad jilicsan, dabeecad shaqo oo xoog badan, iyo dabeecad madax adag. Eeg haddii eeyadan quruxda badan ay adiga kugu habboon yihiin.
Maxaad U Baahan Tahay Inaad Ka Ogaato Labradoodle-ka Australia
Ey hypoallergenic ah oo u eg sida xayawaan cufan oo cufan, maxaa kale oo ka dhigaya Labradoodle-ka Australia inuu ka duwan yahay dhammaan sawirada kale?
Soo-celinta Australiyaanka: Degdeg ah oo Madadaalo leh
Qoys ay jecel yihiin & eey shaqeynaya oo la yaab leh, Australian Retriever (Australian Shepherd Golden Retriever mix) ayaa kugu soo jiidan doona indhihiisa eey eyga ah!
Miyuu iskudhafka Australian Shepherd Blue Heeler adiga kugu habboon yahay?
Weligaa ma maqashay Texas Heeler? Farsamo ahaan loogu yaqaan Australian Shepherd Blue Heeler mix, isweydaarsigaani wuxuu noqon karaa eeyga xoolo dhaqatada ah.
intee le'eg buu seexdaa ilmahu
poodle qaso shih tzu
Waa maxay macnaha brindle ee eeyaha
pitbull sanka buluuga ah oo buuxa
waa maxay isku darka eeyga
Adhijirro yaryar oo Australian ah oo koray